STSI, Fanofanana, zon'ny | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: GIBDD, Fampiofanana, Zo
Mandra-pahoviana no hiasa ny saram-pianarana amin'ny fiara? sary int
Mandra-pahoviana no marina ny mari-pahaizana momba ny diplaoman'ny sekoly familiana? sary ext by life http://www.avtoshkolakam.ru/poleznaya-informatsiya/31-skolko-dejstvuet-svidetelstvo-ob-okonchanii-avtoshkoly http://www.zmost.ru/notes/experts/379-svidetelstvo-ob -okonchanii-avtoshkoly-srok-dejstviya Raha teorika dia antontan-taratasim-pianarana nahazo diplaoma avy amin'ny sekoly mpamily fiara no antontan-taratasim-panjakana mitovy amin'ny an'ny diplaoma avy amin'ny andrim-pianarana, fa ...
Mila hery avy amin'ny mpisolo vava hitondra fiara ve ianao?
Mila fahefana mpisolovava amin'ny zon'ny mpamily fiara ve ianao? Manomboka amin'ny 24 novambra, ny mpamily dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana, taratasy fanamarinana ...
zo amin'ny môtô
zon'ny zon'ny môtô an'ny fiara sy ny traktera Fanontaniana na tolo-kevitra ve?))) Sokajy ilaina ny zon'olombelona Ary raha mihoatra ny 50 metatra toratelo ny volan'ny moto. Na dia mahatratra 100 metatra toratelo aza ny scooter Japoney ...
fomba sy toerana ahazoana fahazoan-dàlana hianatra fiara mitondra fiara?
ahoana ary aiza no ahazoana fahazoan-dàlana hofanina amin'ny fiofanana momba ny fiara? Raha efa manana traikefa amin'ny fiara mandritra ny telo taona sy fiara misy boaty fanamoriana ianao, raha mahatsapa faniriana tsy hay tohaina ...
Inona no sazy entina mampandeha ny fifamoivoizana amin'ny fivoriana iray?
Inona no sazy tokony hizoranao amin'ny fifamoivoizana amin'ny lalana mankany amin'ny fivoriana? Raha manaporofo ianao fa tsy nisy biriky, dia hitondra anao izany, fa raha tsy izany kosa, dia sambany mandeha 4 volana, vao mainka ...
Ohatrinona ny fanamarinana ny fampiofanana amin'ny sekoly ambaratonga fiara, izany hoe amin'ny fotoana inona no azonao atao?
Ohatrinona ny taratasy fanamarinana fiofanana amin'ny sekoly mpamily fiara, izany hoe amin'ny firy no ahafahan'ny olona mahazo fahazoan-dàlana? Ny taratasy fanamarinana ny famitana ny SEKOLY MITONDRA dia tsy misy lalàna voafetra. Toy ny diplaoma amin'ny institiota iray izy io. Toy ny olona ...
Ohatrinona ny mividy ny sokajy B zo?
Ohatrinona ny vidin'ny fividianana ny zon'ny sokajy B? Tohanako daholo ireo voalaza etsy ambony. mampianatra. ary atolory azy ny tenanao. Voasoratra amin'ny rà ny fitsipiky ny fifamoivoizana. ny fahafantarana ny lalàna no hamelona anao. miampy ny hambom-po fa nandalo ianao, minoa ahy, fahatsapana mahafinaritra. ...
Ahoana no ahafahako manova ny zo Sovietika ho an'ny vaovao? Mila fanadihadiana indray ve aho? Nekena ny zon'izy ireo tamin'ny taona 1975
Ahoana ny fomba hanakalo ny zon'ny Sovietika taloha ho an'ny vaovao? Mila fanadinana indray ve ianao? navoaka ny fahazoan-dàlana tamin'ny 1975. Tsy mila mianatra ianao, ary tsy maintsy mandalo fanadinana, saingy tsy misy dikany io, herinandro miaraka amina boky ao ...
Ahoana ny fomba "mivezivezy" araka ny tokony ho izy amin'ny kodiarana eo alohan'ilay lanezy
Ahoana ny fomba "hivezivezena" amin'ny kodiarana eo alohan'ny oram-panala dia tsy maintsy misy tilikambo ampy amin'ny kodiarana mitondra fiara, raha tsy izany dia tsy ho solafaka izy ireo ary handeha toy ny savily ny fiara, ny fampitana dia tokony ...
Polisin'ny fifamoivoizana, serivisim-panjakana, inona no hatao, ny olana mitovy ... mety efa nisy nahomby? ny taratasy fanamarinana dia tsy maintsy misy tombo-kase avy amin'ny tantely. foibe nanadihadiana anao. tokony hisy ny ...
inona no sazy entina hampidinana fiara tsy misy sokajy B, fa misy sokajy C
onitra inona no apetraka amin'ny familiana fiara tsy misy sokajy B, fa misy ny sokajy C fohifohy: 5 ka hatramin'ny 15 roubles + toerana fitobiana! Andininy 12.7 ampahany 1 amin'ny fehezan-dalàna mifehy ny federasiona rosiana: https: //temuri.ru/ezda-bez-kategorii / ...
Ahoana ny fomba hanatanterahana tsara ny singa "flyover" ao amin'ny autodrome?
Ahoana ny fomba hanatanterahana tsara ny singa "flyover" ao amin'ny autodrome? Manoro hevitra anao aho mba handeha amin'ny fanadinana, toy ny nampianarin'ny mpampianatra ahy .. Na dia tsy mitovy aza ny fanaovany azy .. FA ho an'ny fanadinana kosa no ...
Famerenana ny fahazoan-dàlana hamily fiara iray!
Fanarenana fahazoan-dàlana mpamily! Mba hamerenana amin'ny laoniny izay very. VU nangalatra na simba ary taratasy fanamarinana fisoratana anarana amin'ny fiara Mila mifandray amin'ny MREO OGIBDD ianao, izay anoratanao fangatahana famoahana VU vaovao sy ...
Karazana dokotera manao ahoana no ilainao mba hahazoana tantely? mari-pankasitrahana ho an'ny fahazoan-dalana mpamily iray?
Inona ny dokotera mila lalovanao hahazoana tantely taratasy fanamarinana fahazoan-dàlana hamily? Manana kaomisiona eo amin'ny polisy misahana ny fifamoivoizana isika ... misy neuropathologist ... mpitsabo maso ... ary izany ... 15 minitra ... taratasy fanamarinana eo am-pelatanan'ny mari-pahaizana psychoneurological ...
Eo amin'ny fidirana amin'ny sisin-dalana, misy fiara tsy mitsaha-mitazona fiara, misy antony ve mitaraina ary aiza no azoko aleha?
ny fiara dia mijanona tsy tapaka eo am-baravarana amin'ny arabe, misy ve ny fitarainana ary aiza no azonao aleha? Andramo ny mampihatra, angamba hanantona takelaka na hametahana lahatsoratra izy ireo, raha manamarina azy tsara ianao, ary mandoa onitra amin'ny ...
Inona no mahasamihafa ny sokajy "D" sy ny tracteur "? Inona no masontsivana misy ny K-3 D sy ny Belaz A700?
Inona no mahasamihafa ny sokajy "D" sy ny tracteur "? Amin'ny inona ny mason-tsivana K-3 D sy Belaz A700? Raha ny fahitana azy dia mamela anao hamily fiara amin'ny arabe i D. Mandehana any amin'ny forum manokana amin'ny ...
Aorian'izay no hanafoanana ny sazy amin'ny toeram-pitsaboana an'ny Fanjakana misahana ny fifamoivoizana ho an'ny tsy fandoavan-karama?
Aorian'ny ora firy no nofoanana ny onitra ataon'ny polisy misahana ny fifamoivoizana raha toa ka tsy mandoa izany? aorian'ny 1 taona, raha tsy nanandrana nitady anao ny polisy misahana ny fifamoivoizana, raha toa ka nanao izany ny polisy polisy ...
Ohatrinona ny vidin'ny fividianana fanadinana an-tanàna any amin'ny polisy misahana ny fifamoivoizana?
Ohatrinona ny vidin'ny fividianana fanadinana an-tanàna any amin'ny polisy misahana ny fifamoivoizana? Atsofohy mandritra ny taona vitsivitsy. 2 taona lasa izay, nandoa vola 15 roubles ho an'ny fandefasana tsy misy olana izy ireo. Koa satria tsy niova firy ny sandam-bola, dia ny vidiny ...
inona ny antontan-taratasy mila anananao rehefa tonga any amin'ny sekolin'ny fiara ianao. inona ireo?
inona ny antontan-taratasy ilainao hananana rehefa miditra amin'ny sekoly mitondra fiara ianao. karazana inona ? Sekoly mitondra fiara? Tsy misy. ... Ho avy ianao miaraka amin'ny pasipaoronao, holazain'izy ireo aminao ny zava-drehetra ... vola sy pasipaoro Pasipaoro, taratasy fanamarinana ara-pahasalamana ary fijoroana vavolombelona avy amin'ny renibe, ...
Inona no tokony hatao rehefa mandalo ny fanadinana ao amin'ny polisy misahana ny fifamoivoizana, aorian'ny nahazoany ny zo? Rosia, Moskoa
Inona no hatao aorian'ny fizahana ny fanadinana any amin'ny polisy misahana ny fifamoivoizana, rehefa nahazo ny fahazoan-dàlana? Russia, Mosko, mankany amin'ny toerana nanoloranao azy androany ianao, miakatra amin'ny varavarankelin'iza ianao ary miresaka, manampy ary sns, sns ...
101 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,528.